Error ရှင်းနည်းများ, ဗဟုသုတများ, သတင်းများ
ဒီ Model ကတော့ Internet Browser ပါဝင်လာခြင်းမရှိတဲ့အတွက် နည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်တယ်ပေါ့ ဒါဆိုရင် ဒီနည်းအတိုင်းလုပ်လိုက်ပါ Frp Lock Remove လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး sdcard ထဲမှာ အောက်မှာပေးထားတဲ့ Software နှစ်ခုကို Download ဆွဲပြီးထည့်ပေးပါ။ Google Account Manager Quick Shortcut Marker Gmail တောင်းတဲ့နေရာအထိသွားလိုက်ပါ ပြီးရင် Home Button ကို သုံးချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ TalkBack Enable ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ TalkBack Enable ဖြစ်သွားတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ဖုန်းမှာ English လို စကားသံတွေအများကြီး ပြောသံတွေထွက်လာလိမ့်မယ် ပြီးတဲ့အထိစောင့်ပေးပါ ပြီးရင် ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကို တစ်ချက် ပွတ်ဆွဲလိုက်ပါ။ အပေါ်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်. မပေါ်မခြင်း ဖြည်းဖြည်းလုပ်ကြည့်ပါ။ ပြီးရင် Text to speech Settings ကို ရွေးလိုက်ပါ။ သုံးချက်လောက် နှိပ်ရပါလိမ့်မယ်။	Read More
Samsung ဖုန်းများ Adb enable ဖိုင်ရယူခြင်းနှင့် Frp ကျော်နည်း
Samsung ဖုန်းတွေ Adb သိရင် Frp ကျော်လို့ရတယ်ဆိုသိကျမှာပါ ဘယ်နေရာမှာအသုံးဝင်လဲ ? သိပ်အသုံးဝင်တာပေါ့ Samsung တွေ At Command သုံးမရ (modem အလုပ်မလုပ်တဲ့ဖုန်းတွေ) Slide Sync မရတဲ့ဖုန်းတွေ ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ browser ၀င်ပေါက်မရတဲ့ဖုန်းတွေအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်။ သူရဲ့အားနည်းချက်တွေလဲရှိပါတယ်။ ဥပမာ wifi မရတော့တာတွေ ၊ Logo ရပ်နေတာတွေ အပြင် အခြား Error အများကြီးပါ ကိစ္စတော့မရှိပါဘူး Frp ကျော်ပြီးတာနဲ့ Official stock rom or sboot boot ထည့်ပေးလိုက်ရင် နဂိုအတိုင်းပြန်ကောင်းသွားမှာပါ။ ဒီတော့ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ frp ကျော်မယ်ဆိုရင်တော့ မိမိ ဖုန်းရဲ့ stock rom လေးရှိသင့်ပါတယ်။ ဒီ Adb Enabler ဆိုတဲ့ tar ဖိုင်လေးကို ဘယ်ကဆင်းသက်လာလဲဆိုတော့	Read More
pan.baidu မှ Firmware များအားအကောင့်မလို IDM ဖြင့် Download ရယူနည်း
တရုတ် File Cloud Site တစ်ခုဖြစ်တဲ့ pan.baidu.com မှ File တွေကို Download ရယူဖို့ခက်ခဲတာတွေရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့အဆင်ပြေပြေ Download ရယူနိုင်မှာပါ။ ပထမဆုံး မိမိအသုံးပြုရမဲ့ Web Browser က Chrome ဖြစ်ရပါမယ်။ ပြီးရင် အောက်က Link ကိုသွားလိုက်ပါ။ https://tampermonkey.net/ ပြီးရင် အနီရောင် Logo လေးဖြစ်တဲ့ Tampermonkey Beta ကို Install လုပ်လိုက်ပါ။ Chrome Browser ညာဖက်ဒေါင်စွန်းလေးမှာ အနီရောင် Logo လေးနဲ့ Icon တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် အောက်ပါ Link ကို ထပ်သွားပါ။ https://greasyfork.org/en/scripts/7382-baidupandownloadhelper-modify-by-ted423 အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ရေးထားတဲ့ Install Version ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Script တစ်ခု Download ဆွဲသွားပါလိမ့်မယ်. ပြီးရင် မိမိ	Read More
Qualcomm ဖုန်းများ Imei ရှိပြီးတိုင်မတက်ပါက ဖြေရှင်းနည်း
Qualcomm ဖုန်းတွေ Imei ကရှိနေပေမဲ့ တိုင်မတက်တာတွေရှိပါတယ်။ ဒီတော့ တိုင်တက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တာကတော့ QCN ဖိုင်လေးတွေလိုအပ်ပါတယ်။ QCN Backup Restore ပြုလုပ်ရတာခြင်းအတူတူပါပဲ ဒါကြောင့် ဒီ Post မှာ QCN Backup လုပ်တာပဲဖော်ပြပေးပါမယ်။ ပထမဆုံးလိုအပ်တာတွေကတော့ မိမိဖုန်းရဲ့ Diag Port ကို ဖွင့်တက်ရပါမယ်။ Phone Call ကနေ ဖွင့်ဖွင့် adb ကနေ ဖွင့်ဖွင့် Miracle Crack ကနေ ဖွင့်ဖွင့် အဆင်ပြေတာကနေဖွင့်လိုက်ပါ။ Diag Port ဖွင့်တာမရှင်းရင် Qualcomm Imei ရေးတာကို ပြန်ပြီးဖတ်ကြည့်ပါ။ http://blog.regenerationmm.com/2016/08/18/qualcomm-imei-writing-regeneration/ ပြီးရင် QPST ကို Download ဆွဲပါ။ QPST ဆိုတာကတော့ Qualcomm Product Support Tool ကိုဆိုလိုတာပါ။	Read More